၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတွက် အကောင်းဆုံး ထိုင်း BL series (၁၀ )ခု | News Bar Myanmar
၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတွက် အကောင်းဆုံး ထိုင်း BL series (၁၀ )ခု
3 will be free ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ GMMTV မှ ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပီး Lapassalan Jiravechsoontornkul ( Mild )၊ Way-Ae Sangngern ( Joss ), နှင့် Tawan Vihokratana (Tay) တို့မှ အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါသည်။
9. The effect
Cyber bullying နှင့်ပက်သက်ပီး ဖြစ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို သိသိသာသာ ဖော်ပြထားသော ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ Shin နှင့် Kang တို့မှ အဓိကဇာတ်ကောင် အဖြစ်ပါဝင်ထားပီး အခြားနာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များစွာလည်း ပါဝင်ထားပါသေးသည်။
8. He’s coming to me
ဇာတ်လမ်းတွဲ​၏ ပထမဆုံးအပိုင်းကိုည၂၀၁၉၊ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပီး Line TV နှင့် GMM channel တို့တွင်ပြသခဲ့ပါသည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်များအနေနှင့် Singto Prachaya နှင့် Chanagun Arpornsutinam တို့မှ ပါဝင်ထားပါသည်။
7. 2Moons 2
2 Moons the series ကိုအခြေံခံပီး ရိုက်ကူးထားသည့် series တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲသည်အပိုင်းအားဖြင့် ၁၂ပိုင်း ပါဝင်ခဲ့ပီး အဓိကသရုပ်ဆောင်များ အဖြစ် Phana ဇာတ်ကောင်နေရာတွင် Ben Benjamin Brasier တို့မှပါဝင်ပီး Wayo အဖြစ် Earth Teerapat Ruangrikul တို့ပါဝင် ထားပါသည်။
6. Dark Blue Kiss
Dark Blue Kiss ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ KISS Me Again ဇာတ်လမ်းတွဲ​၏ အဆက်ဖြစ်ပီး DBK မှာတော့ ယောကျာ်းလေးနှစ်ဦးကြားက အချစ်ရေးကို အသားပေးရိုက်ကူးထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ GMMTV မှထုတ်လွှင့်ပီး Tay Tawan Vihokratana နှင့် New Thitipoom Techaapaikhun တို့မှ အဓိကပါဝင်ထားပါသည်။
5. Why R U the series
အပိုင်း (၁၃) ပိုင်းပါဝင်ပီး ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက်နေ့ ၂၀၂ဝတွင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ Line TV တွင်ကြည်ရှုနိုင်ပီး အဓိကသရုပ်ဆောင်များအဖြစ် Saint Suppapong Udomkaewkanjana နှင့် Zee Pruk Panich တို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
4.2gether the series
GMMTV မှရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပီး အပိုင်း (၁၃) ပိုင်းပါဝင်သော Bl series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀​၏ အောင်မြင်သော Bl series တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်များ အနေနှင့် Bright Bachirawit Chivaaree နှင့် Win Maetawin Opasiamkajorn တို့မှ ပါဝင်ထားပါတယ်။
Until we meet again ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ စာရေးဆရာမ Lazy sheep ​၏ The Red Thread ဆိုသည့် Novel ကိုအခြေခံ၍ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပီး Fluke Natouch Siriponthon နှင့် Ohm Thitiwat Ritprasert တို့မှ အဓိကသရုပ်ဆောင်မျာဒအဖြစ် ပါဝင်ထားပါသည်။
GMMTV မှရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပီး အချစ်၊ဟာသ ၊လူငယ်တို့​၏ အခြေအနေများကိုရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကမင်းသားများ အနေနှင့် Gun Atthaphan Phunsawat နှင့် Off Jumpol Adulkittiporn တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသား Romance drama အမျိုးအစားဖြစ်ပီးညအပိုင်းအားဖြင့် ၁၃ ပိုင်းပါဝင်ပီး Line TV app တွင်တော့ ၁၂ ပိုင်းပြသခဲ့ပီး special episode ဖြစ်သော အပိုင်း ၁၃ ကိုတော့ သိီးသန့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။ စာရေးဆရာမ MAME12938 ​မှ သူမ​၏ Novel ဖြစ်သော Tharntype story ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပီး အောင်မြင်မှုများလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်များ အနေနှင့် Mew Supppasit Jongcheveevat နှင့် Gulf Kanawut Traipipattanapong တို့မှပါဝင်ထားပါသည်။
Next စစ်မှုထမ်းပြီးနောက် Kim Soo Hyun ၏အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အကြောင်း တစ်စိတ်တပိုင်း »
Previous « Fan တိုင်းသိထားသင့်သည့် ဒဏ်ရာရနေတာတောင် အားတင်းပြီး စင်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ idol များ